Koorsooyinka 10ka Aasaasiga ah iyo kuwa Sare ee Photoshop | Abuurista khadka tooska ah
Lola curiel | | Design Graphic, Qalabka Naqshadeynta, Dhiirrigelinta, Photoshop
Haddii aad raadineysid koorso Photoshop Online ah taas oo ku habboon baahiyahaaga, ma dhaafi kartid qoraalkan. Internetka, bixinta koorsooyinka waa mid aad u ballaaran, markaa helitaanka midka kugu habboon adiga ayaa noqon kara odyssey. Sidaa darteed, si aanad waqti badan kaaga lumin isbarbardhigga, Waxaan kuu soo qaadaneynaa liistadan oo ah 10 koorsooyinka aasaasiga ah iyo kuwa ugu horumarsan Photoshop Diyaar ma u tahay inaad waxbarto? Si fiican u fiirso talooyinkayaga.
1 Koorsooyinka aasaasiga ah ee Photoshop
1.1 Hordhaca Adobe Photoshop
1.2 Adobe Photoshop oo loogu talagalay tafatirka sawirka iyo dib u hagaajinta
1.3 Adobe Photoshop oo loogu talagalay sawir qaadayaasha
1.4 Hordhaca Photoshop ee Sawirada
1.5 Adobe Photoshop CC: Bilow Dhamaystiran Koorsada Khabiirka
1.6 Baro inaad ku sawirto sawiradaada Photoshop CS6
2 Koorsooyinka Photoshop ee horumarsan
2.2 Horusocod Photoshop: Hihg-End Dib-u-Celinta Dharka iyo Qurxinta
2.3 Advanced Photoshop oo loogu talagalay hawl socodsiinta la dedejiyay
2.4 Dib-u-hagaajinta sawir sare ee Photoshop
Koorsooyinka aasaasiga ah ee Photoshop
Haddii aad rabto inaad ku tababarto naqshadeynta garaafka, Adobe Photoshop waa bilow wanaagsan. Software tafatirka Tani waa mid aad u xirfad iyo wejiyo badanWaxaa loo isticmaali karaa in lagu saxo sawirrada iyo sidoo kale in laga abuuro qaybo ka xoq. Si kastaba ha noqotee, waan ka warqabnaa taas ma ahan qalab fudud iyo in marka hore ay xoogaa cabsi gelin karto. Sidaas, Waxaan kuu soo xulnay 6 koorso oo Photoshop aasaasi ah taasi waxay kaa caawin doontaa inaad qaadatid tallaabooyinkaaga koowaad ee barnaamijka.
Hordhaca Adobe Photoshop
100% jawaab celin togan
6h 54m oo fiidiyow ah
5 koorso oo xawaarahaaga ah iyo marin aan xad lahayn
Bixinta shahaadada dhamaadka
Hordhaca Adobe Photoshop Waa xirmo ka kooban 5 koorso waxaa baray Carles Marsal. Waa hordhac xoog leh, guud ahaan waxaa jira 50 cashar, laakiin waxay kuu oggolaaneysaa inaad hesho dhammaan aqoonta lagama maarmaanka ah inaad ku shaqeyso qalabkan heer xirfadeed, Xitaa haddii aad wax kasoo bilowdo!
5-ta baloog waxaad ka baran doontaa:
Ku wareeji interface-ka oo gacanta ku dhiga aaladaha ugu waaweyn (koorsada 1)
Daawee sawirrada leh Photoshop (koorsada 2)
Isticmaal iyo burush dhig (koorsada 3)
Samee dib u soo celinta sawir (koorso 4)
La shaqee iftiinka iyo midabka (koorsada 5)
Mid ka mid ah qodobbada ugu soo jiidashada badan koorsada ayaa ah taas waxaad ku sameyn kartaa xawaarahaaga. Marka aad iibsato, adigawaxaad heli doontaa marin aan xad lahayn, sidaa darteed waxaad had iyo jeer dib ugu laaban kartaa casharradii horey loo soo maray si loo caddeeyo shakiga ama loo xoojiyo aqoontaada.
Adobe Photoshop oo loogu talagalay tafatirka sawirka iyo dib u hagaajinta
6h 30m oo fiidiyow ah
5 koorso oo diiradda lagu saaray dib u soo celinta sawirrada
Koorsadan Domestika, oo uu baray sawir qaade Daniel Arranz, ayaa ah aad diirada u saaray dib u soo celinta iyo daaweynta muuqaalka. Haddii jacaylkaaga sawirku uu yahay waxa dhaliyay xiisahaaga Photoshop, kani waa koorsadii aad raadineysay!
Waxay ka kooban tahay 5 baloog, 51 cashar oo wadar ah, kuwaas oo waxaad baran doontaa inaad barato ficilada ugu faa'iidada badan ee barnaamijka. Dhamaadka koorsada waxaad kaheli doontaa aqoonta lagama maarmaanka u ah inaad sawirradaada wax uga beddesho sida xirfadle run ah oo ku saabsan tafatirka iyo dib u hagaajinta In kasta oo ay tahay mid gaar ah, sharraxaadu waxay ka bilaabantaa aasaasiga oo aad bay u cad yihiin, oo ka dhigaysa koorso bilow-saaxiibtinimo ah oo ku jirta Adobe Photoshop. Intaa waxaa dheer, marin u helistu waa mid aan xad lahayn, waqti ayaad ku qaadan kartaa inaad fahamto fikrad kasta sifiican oo dib u eeg mar kasta oo aad rabto.
Adobe Photoshop oo loogu talagalay sawir qaadayaasha
99% jawaab celin togan
9h 21m oo fiidiyow ah
Farsamooyin aad ku siiso xirfad dhammaystiran sawirradaada
Iyo haddii aan sii wadno ka hadalka sawir qaadista, koorsadan Orio Segon waa xulasho kale oo aad u wanaagsan. Koorsadani waxay muujineysaa, qaab fudud, fureyaasha si aad u soo-saarto sawirradaada oo aad u gaarto natiijooyin xirfadeed. Waxay ka kooban tahay wadar ahaan 47 cashar oo lagu diyaariyey 5 baloog:
Xannibaadda ugu horreysa ee ay barnaamijka waa la soo bandhigayaa iyo qalabka waxtarka badan.
Baloog labaad oo kaas ah isu galiyaa hagaajinta goobaha, dhammeeyaa iyo hordhac ku saabsan Kaamirada Raw.
Baloog saddexaad ayaa diiradda la saaray kalfadhiyada banaanka.
Baloog afaraad ayaa loo hibeeyay sawirka xayeysiinta.
Iyo xayndaabkii ugu dambeeyay ee Sawir qaadista alaabta.
Sida koorsooyinka kale ee Domestika, Adobe Photoshop oo loogu talagalay sawir qaadayaasha waxay leeyihiin marin aan xadidneyn. Waxa ugu fiican ayaa ah, in kasta oo diirada la saaray aqoonta farsamada ee la xidhiidha barnaamijka, Soo bandhig xeelado wax ku ool ah oo waxtar leh oo hagaajin doona dhammaadka shaqooyinkaaga. Si tartiib tartiib ah, waxaad u milmi doontaa farsamooyin kuu oggolaanaya inaad hesho dhammaan kartidaada hal-abuurnimo.
Hordhaca Photoshop ee Sawirada
6h 52m oo fiidiyow ah
Sawir dhijitaal ah oo laga soo bilaabay
Ma jeceshahay sawir qaadista oo aad dooneysaa inaad bilowdo sameynta sawirro dhijitaal ah oo Photoshop ah? Bari 6 xirmo koorso waxaa baray Gemma Gould ayaa kaa guuleysan doonta. Qaadashada, ma aha oo kaliya inaad awood u yeelatid inaad hal-abuurnimadaada si buuxda u dhuujiso, laakiin sidoo kale waxaad ogaan doontaa farsamooyin iyo qaabab cusub oo gacan ka geysan doona horumarkaaga farshaxan ahaan.
Gould wuxuu ku bilaabi doonaa aasaasiga, isagoo kugu soo bandhigi doona barnaamijka weyn iyo qalabka, iyo ayaa kugu hagi doona mashruuca ugu dambeeya taas oo aad ku baran doonto inaad u dhoofiso shaqadaada si aad u daabacdo oo aad ugu isticmaasho internetka. Haddii aad horeyba naftaada ugu hurtay sawirka, koorsadani waa fursad aad ku horumariso astaantaada xirfadeed ugana faa'iideyso abuurkaaga. Cilladaha kaliya ee aan arkayo ayaa ah in maqalka fiidiyowyadu ay ku qoran yihiin Ingiriis, sidaa darteed haddii aadan luuqadda baranin waxaa laga yaabaa inaad yara gaabiso. Si kastaba ha noqotee, dhaqaajinta subtitles ee Isbaanishka waa inaadan wax dhibaato ah qabin.
Adobe Photoshop CC: Bilow Dhamaystiran Koorsada Khabiirka
4.5 / 5 qiimeyn
Si qoto dheer u ogow barnaamijka
Koorsadan Photoshop, ee uu baray Phil Ebiner, ayaa ah si gaar ah loogu talagalay in kaliya 19 saacadood oo fiidiyoow ah iyo laylis yar wuxuu ka gudbaa bilowga ilaa khabiir. Bilowga waxay ku siin doonaan qalab si aad si sax ah ula socon kartid casharrada iyo inaad u hurto dhammaan waqtiga dheeriga ah ee aad rabto.
Waa a doorashada ugu fiican ee bilowga ah maxaa yeelay waxay isu keentaa wax kasta oo aad u baahan tahay si qoto dheer u ogow barnaamijka. Waxa ugu fiican ayaa ah inta aad baraneyso inaad isticmaasho qalabka ugu weyn ee software-ka, waxaad qaabeyn doontaa naqshadeynta dhabta ah iyo qaybaha shabakadahaaga bulshada ama ganacsigaaga. Intaa waxaa dheer, waxaad ku bilaabi doontaa dib-u-hagaajinta sawir.
Baro inaad ku sawirto sawiradaada Photoshop CS6
4.4 / 5 qiimeyn
Baro sida loo sameeyo dib-u-hagaajinta aasaasiga ah ee Photoshop
Koorsadan Adobe Photoshop waa xiiso leh in lagu bilaabo barnaamijka. Bixinta sharaxaad aasaasi ah oo cad qalabyada ugu muhiimsan ee barnaamijka naqshadeynta waxayna kugu qalabeyn doonaan aqoonta lagama maarmaanka u ah fulinta sawirkaaga ugu horeeya ee dib loo qurxiyo, adeegsiga farsamooyin kala duwan, miirayaal iyo qaabab kala duwan. Sidoo kale, markaad dhammaystirto Casharrada 44 taasi waxay ka kooban tahay koorsada aad ku guuleysan lahayd Abuur sawiradaada iyo sawiradaada ugu horeeya xirfadlayaal
Koorsooyinka Photoshop ee horumarsan
Haddii aad horey u taqaanay sida loo isticmaalo Photoshop laakiin ma waxaad dooneysaa inaad ku booddo heer, samee koorso horumarsan ayaa kaa caawin karta si loo gaaro himiladaas. Waxa ugu fiican ayaa ah in marka aad ka cadaato dhinacyada aasaasiga u ah barnaamijka, inaad diirada saari karto baro farsamooyin gaar ah oo hagaajiya tayada naqshadahaaga oo waxay kuu oggolaaneysaa inaad si fudud ugu fududaato maareynta qalabkan. Ku 4 koorsooyin Photoshop ah oo horumarsan oo aan hoos ku soo bandhigno iyagu aad ayey ugu habboon yihiin in barnaamijka la qoto-dheereeyo oo ay noqdaan xirfadle run ah.
4h 52m oo fiidiyow ah
5 koorso si aad uhesho heerka xiga
Carles Marsal wuxuu ku bixiyaa Domestika a xirmo 5 koorso oo heer sare ah loogu talagalay kuwa horay u qaatay koorsada hordhaca ah Adobe Photoshop ama sifiican u yaqaan barnaamijka. Ku Casharrada 35 Taasi waxay ka kooban tahay, ururi farsamooyinka lagama maarmaanka u ah hagaajinta nashqadahaaga iyo horumarinta xirfadahaaga barnaamijka. Koorsooyinkan ayaa kuu oggolaanaya:
Baadh fursadaha dulinka Photoshop
Baro sida isticmaal qaababka isku dhafan ee kala duwan
Ka shaqee hal abuur badan oo leh qoraallo
Soo ogow kartida walxaha caqliga badan inuu ku caawiyo kordhi shaqadaada
aplicar miirayaasha smart
Horusocod Photoshop: Hihg-End Dib-u-Celinta Dharka iyo Qurxinta
4.7 / 5 qiimeyn
Ku takhasus dib u soo celinta sawirrada
Koorsadan Photoshop, oo laga heli karo Undemy, Waxaa loogu talagalay xirfadlayaasha sawir qaadista ama naqshada ay raadinayaan takhasus u leh sawir celinta iyo kuwa sida gaarka ah u daneynaya aduunka mood iyo qurux. Waxa ugu fiican ee koorsadan waa tan kaliya 2 saacadood isku koobtaa wax kasta oo aad u baahan tahay si aad u barato sida loo sameeyo dib-u-hagaajinta sawir tayo sare leh, Mahadsanid sharraxaad cad iyo ciyaar farsamooyin kala duwan oo aad u tiro badan. Waxyaabaha koorsada ku jira waxaad ka heli doontaa macluumaad ku saabsan:
Lacag celin maqaarka
Codsi qurxinta dhijitaalka ah
Farsamo ku dhufo oo gub
Advanced Photoshop oo loogu talagalay hawl socodsiinta la dedejiyay
4.6 / 5 qiimeyn
Baro inaad si dhakhso leh u shaqeyso
Waxaad horeyba ugula dhaqmi laheyd Adobe Photoshop si kaamil ah laakiin waxaad dareemeysaa inaad waqti badan kubixiso inta aad jeclaan laheyd inaad naqshadeyso gabal walba Haddii aad dareento in laguu aqoonsaday, tani waa koorsadaada. Casharrada waxaad ka heli doontaa talooyin fara badan oo kala duwan, farsamooyin iyo talooyin si aad u gaarto habsami u socodka shaqada, adigoon u hureynin tayada qaybahaaga. Waxaad baran doontaa inaad ka faa'iideysato hawlaha otomaatiga ah Photoshop oo waad ogaan doontaa muhiimadda ay leedahay badbaadinta geeddi-socodka iyo saamaynta in dib looga warshadeeyo qaybaha kale.
Oo hadaad waqtiga ku yartahay, ha walwalin! Faahfaahinta waa mid kooban, sidaa darteed waxaad ku dhammeyn kartaa koorsada saacado yar gudahood. Xitaa markaad dhameyso wali waad heli doontaa marin, sidaa darteed marwalba waad daawan kartaa fiidiyowyada oo ku celi casharadii kugu adkaaday.
Dib-u-hagaajinta sawir sare ee Photoshop
Baro dib u soo celinta sawirrada
Koorsadan Adobe Photoshop waxaad ogaan doontaa wax kasta oo aad u baahan tahay si aad u sameyso taabasho xirfad-yaqaanno ah sawiradaada. Farsamooyinka lagu soo saaray koorsada ayaa loogu talagalay gaaro taabashada dabiiciga ah, oo ixtiraamaya maqaarka maqaarka isla markaana u oggolaanaya horumarinta shaqooyinka sawir qaadista tayada leh. Waxay ka kooban tahay saddex cashar kala duwan oo aad ku baran doonto:
Lacag celin wajiyada iyo jirka
La shaqee iftiinka iyo midabka
La shaqee kala duwanaansho iyo madow iyo caddaan
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Design Graphic » Koorsooyinka 10ka Aasaasiga ah iyo kuwa Sare ee Photoshop